Global Voices teny Malagasy » Fihetsiketsehana tao Beiroty nomem-boninahitra tanaty sarintany maneho ny hetsipanoherana ho toy ny dingana ‘fanorenana tanàna’ mivantana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Novambra 2019 14:51 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Noubel Nandika Candy
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Libanona, Fampandrosoana, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna, Zon'olombelona
Ilay sarintany narafitr'i Antoine Atallah mampiseho ny fomba nentin'ireo vondrona isankarazany mpanao hetsipanoherana mba hibodoana ny habaka sy hanaovana karazana hetsika maro samihafa. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Valinkafatra ho an'ny fanambaràn'ny governemanta ny fametrahana haba/hetra vaovao ireo hetsipanoherana  nifafy tao Libanona hatramin'ny 17 Oktobra 2019. Nanomboka teo izy ireny dia nivoatra ho lasa fandàvana  ny lasitra politika sy toekarena izay namela ireo sangany teo an-toerana hanao ampihimamba ny fifehezana ny firenena hatramin'ny nifaranan'ny ady an-trano  tamin'ny 1990. Miray ao anatin'ireny vondrona ara-pinoana ireny, saranga ary ny miralenta, tamin'ny 29 Oktobra dia nahavita nametraka marika fandresena goavana ireo mpanao hetsipanoherana rehefa nametraka fialàna  ny Praiminisitra Saad Hariri.
Nanomboka teo dia noresahana be tany amin'ny faritra Afovoany-Atsinanana sy hatrany lavitra any ireo tantaram-baovao, saripika sy lahatsary — ary ankehitriny, sarintany iray miavaka. Misy fitantaràna iray vao haingana momba ilay hetsika, dia ny fanehoana an-tsarintany  ireo hetsipanoherana, nataon'i Antoine Atallah, Libaney iray mpahay maritrano, mpanome endrika tanandehibe ary mpikatroka ho an'ny tontolo iainana.
Fihetsiketsehana tao Beiroty tamin'ny 19 Oktobra 2019, Sary an'i Shahen Araboghlian tao amin'ny Wikipedia, CC BY-SA 4.0
Raha nanontaniana ny antony nifidianany io endrika miavaka io, dia hoy i Atallah manazava:
“Fanampiny lehibe ho an'ny “magma” hita maso miantefa amintsika ireo sarintany ireo, satria ahafahantsika mamintina, misaintsaina ary mametraka ny zavatra maro ho anaty vinavina. Misy sary iray ivelany, nohalehibeazina, topimaso manao izay hampibaribary kokoa azy ireny”.
Raha nanontaniana azy ny antony nanosika azy hanao asa toy izao, dia hoy izy:
“Ny zavamisy hoe sambany, hatramin'ny nanombohan'ny ady an-trano sy ny nandraisan'ny Solidere ny fifehezana, no mba nomena ny vahoaka ny vintana hitaky ny zony hanana tanàna tao anaty vohitra iray izay nendahina tamin-dry zareo. Tena fotoana iray manainga fanahy izany, izay afaka nahitàna maso mivantana “ny fanorenana tanàna”. Nahatsapa aho fa ny fametrahana an-tsarintany io dingana io dia faran'izay tena manandanja tokoa satria mihelina sy mangozohozo ilay fibodoana misy amin'izao fotoana izao, afaka ny hikisaka sy hiova na hanjavona tampoka”.
Etsy ambony i Atallah dia manondro ny orinasa Solidere , izay manana fifamatorana akaiky amin'ny filoha Hariri ary nanomboka nanao fanorenana sy nanitatra io faritra io tamin'ny 1994 tamin'ny alàlan'ireo trano fisakafoanana sy toerampivarotana lafo vidy izay natao indrindra indrindra ho an'ireo Libaney mpanankarena ary ireo mpitsidika avy any amin'ny Gôlfa.
Raha toa tao anatin'ny 24 ora monja mahery kely ilay sarintany dia efa niparitaka tao amin'ny media sôsialy, efa mahazo vahana sahady izy satria mampiseho tsara ny filàn'ny mponina marobe, hoy i Atallah:
“Nalain'ireo vahoaka Libaney ho azy ny faritra babangoana tao afovoan-tanàna mba hanorenan-dry zareo ireo filàna ilainy: miresadresaka, miala sasatra, mihinana ary miala voly maimaimpoana na amin'ny sanda mirary na mandihy. Lesona ho an'ny tsirairay io, izay nanamaivana ny fahatongavantsain'ny vahoaka, ny fahamatorany ary ny fahafahany ho lasa mpanorina habaka, ny ho lasa mpanangan-javatra misy dikany, ny ho lasa mpisehatra anaty tetikasa iombonana” .
Momba io fanantenana ny amin'ny hoavy io, mamintina i Atallah hoe:
“Ny fanamby sendraina dia avy amin'ny rafitra politika efa nanjaka nandritra ny 30 taona ary manohy manao ampihimamba sy manana fahefana goavana. Raha ny marina, ny tena fanamby dia ny fangatahana aminà antenimiera iray izay manohitra anay ihany mba hamorona governemanta hifanandrina amin-dry zareo. Sarotra sy manahirana ny fandidiana. Saingy matoky koa aho ny faharanitantsain'ny rehetra izay hita nandritra ireo herinandro nanaovana revolisiôna. Tena misy lanjany izany ary tsy ho toy ny taloha intsony ny zavatra rehetra”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/12/144659/
 ady an-trano: https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanese_Civil_War
 nametraka fialàna: https://www.aljazeera.com/news/2019/10/lebanon-pm-saad-hariri-offers-resignation-mass-protests-191029123235727.html
 fanehoana an-tsarintany: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10100641603788932&set=a.579375950062&type=3&theater